Buyaas समाचार - एनाबोलिक्स स्टेरियोड्स निर्माताहरू
सबैलाई तपाईंले शरीरको निर्माणको लागि अनाभार (ओक्स्यान्ड्रोलोन) बारे जान्न आवश्यक छ
अनवर (ओक्स्याण्ड्रोलोन) के हो? Oxandrolone (53-39-4), ब्रान्ड नामहरूमा बेचेको Oxandrin र Anavar, अरूको बीचमा, एक एन्ड्रोजन र anabolic स्टेरॉयड (एएएस) औषधि हो जुन विभिन्न स्थितियों मा वजन बढावा गर्न को लागि प्रयोग गरिन्छ, प्रोटीन catabolism लामो समयसम्म कोर्टिसोस्कोडेरियो थेरेपी, गहिरो जलाएर पुन: प्राप्तिलाई समर्थन गर्न, ओस्टियोपोरोसिससँग सम्बन्धित हड्डीको दुखाइको उपचार गर्न, विकासमा सहयोग गर्न ...
Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate (कुन एक विजेता?)
Trenbolone एनोटेट के हो? र यो कसरी काम गर्दछ? Trenbolone एनोटेट (10161-35-8) र Trenbolone एसीटेट (10161-34-9) दुई को सबै भन्दा साधारण प्रयोग एनालिकिक एन्ड्रोजेनिक स्टेरियोड्स हुन्। Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate परिणामहरू लगभग एउटै छन्। अंतर प्रत्येकले सक्रिय Trenbolone आधार को रिलीज गर्ने समय संग आउँछ। यद्यपि तिनीहरूले कुनै पनि तरिका समान, Trenbolone Enanthate आवाज र ...
Masteron Propionate या Masteron Enanthate? तपाईंको लागि कुन को लागी राम्रो छ?
Masteron Propionate (Drostanolone Propionate) के हो? Masteron Propionate (521-12-0) र Masteron Enanthate (472-61-1) फरक फरकसँग Masteron को फरक हुन्छन्। तिनीहरू दुवै इंजेक्शनयोग्य छन् र बडी बङ्गलादेशका बीचमा हुन्छन्। दुवै को बीच मुख्य अंतर खुराक प्रशासन र उनको आधा जीवन हो। माईक्रोन प्रोभियन्स खुराक सानो छ तर औषधीले चाँडै काम गर्दछ र हरेक दिन दिइन्छ।